Dib-u-tirinta codadka degmadda lixaad oo la joojiyey iyo Cabdi Warsame oo guushii si rasmi ah loo gudoonsiiyey -
Maanta oo talaado ah, taariikhda bisha November ay tahay 11/28/2017 ayaa waxaa magaalada Minneapolis saaka aroortii hore ka furmay dib u tirintii codadkii dadkii ka dhiibtay codbixinta degmadda lixaad ee magaalada Minneapolis.
Maxamuud Nuur oo ahaa musharax u tartamayey kursiga degmadda 6-aad ayaa maanta si rasmi ah u furay dacwad iyo codsi uu ku dalbanayo in dib loo tiriyo dadkii ka codeeyay doorashadda degmadda lixaad ee la soo gebagabeeyay 7-dii bisha Nofeembar, 2017.
Saaka markii la bilaabay cod tirintii, gaar ahaan sanduuqyadii ay ku jireen codadkii laga dhiibtay saddex xaafadood oo si gaar ah qareenka Maxamuud Nuur uu u codsaday in la tiriyo ayaa waxaa si lama filaan ag go’aan u gaaray, codsadayna in la joojiyo dib u tirinta codadka qareenkii matalayey Maxamuud Nuur.
Joojinta la joojiyey in la sii wado dib u tirinta codadka ayaa haddaba ka dhigan in Cabdi Warsame uu ka guuleystay Maxamuud Nuur iyo Faadumo Yusuf oo iyaddu mataleysay xisbiga Jamhuuriga. Wax is bedel ahna aynka ku soo kordhin natiijadii hore ee doorashadda.
Go’aankan maanta soo baxay ayaa ka dhigan in ayna waxba iska badalin natiijadii doorashadda ee uu Cabdi Warsame ku guuleysta tartankii loogu jiray kusiga hogaanka degmadda lixaad.
Musharax Maxamuud Nuur ayaa wali ku andacoonaya in ay jiraan khaladaad badan oo dhacay maalintii doorashada, wuxuuna maanta sheegay in uu hayo cadeymo tusaya khaladaadka dhacay maalintii doorashadda, isaga oo waliba maxkamad geyn doona cadeymaha uu sheegay in uu hayo.
Maamulka doorashadda ee magaalada Minneapolis ayaa kulmi doona maalinta Jimcaha ah si ay go’aan uga gaaraan in ay shahaadada guusha doorashada gudoonsiiyaan Cabdi Warsame oo isagu noqday musharaxii helay codadka ugu badan doorashadii dhacday 7-dii bisha Nofeembar, 2017.
Xigasho Sawirka: StarTribune